कता जाँदैछ आधुनिक गीत | मझेरी डट कम
kbs — Tue, 07/29/2008 - 20:18
मैले थाहा पाएसम्म सात साल पहिले नेपालका शहरी क्षेत्रमा हिन्दी गीतको बोलवाला थियो । धार्मिक समारोहमा पनि हिन्दी भजन गाउने चलन थियो । स्कूलको प्राङ्गणमा हिन्दी पर््रार्थना गरेर मैले एसएलसी पास गरेको हुँ । धरानमा पहाडबाट र्झर्ने ढाक्रेहरूले लोकगीत गाउँथे । मा. मित्रसेनका केही गीत मैले त्यतिबेलै सुनेको थिएँ । तर त्यस्ता गीतलाई सम्भ्रान्त शहरियाहरूले हल्का रूपमा लिने गर्थे । सात सालमा प्रजातन्त्र रेडियोबाट रानुदेवीका गीत सुन्न पाइयो । सेतुराम, मेल्वादेवी, उस्ताद साहिँला, मिस प्रभाका गीत धेरैपछि काठमाडौँमा सुनेको हुँ । धर्मराज थापाले ठाउँठाउँमा गाएर लोकगीतको लहर ल्याएपछि नै शहरिया समाजमा लोकशैलीका गीतले प्रतिष्ठा पाउन थालेका हुन् ।
यो पृष्ठभूमिमा नेपाली आधुनिक गीत सिर्जना गरेर त्यसलाई स्थापित गराउने काम चानचुने थिएन । यसका लागि मा. रत्नदास, नातिकाजी, पन्नाकाजी, उही गोविन्दबहादुर, हर्रि्रसाद रिमाल, किशोरीदेवी, कोइलीदेवी, जनार्दन सम, भैरवबहादुर, ज्ञानबहादुर जस्ता अग्रजहरूलाई सलाम गर्नुपर्छ । उनीहरूले आधुनिक नेपाली गीतलाई मौलिक स्वरुपका साथ स्थापित गराइदिए । आधुनिक गीतलाई गहिराइ र उचाइ दिने काममा दार्जीलिङका अम्बर गुरुङ, शरण प्रधान, अरुणा लामा, शान्ति ठटाल, ग्याल्मो र बराइली बहिनीहरूले आफ्नै ढङ्गले योगदान गरे । यता बच्चुकैलाश, पुष्प नेपाली, कुमार बस्नेत, फत्तेमान, गङ्गा राणा, नारायणगोपाल, प्रेमध्वज प्रधान, गोपाल योञ्जन, भक्तराज आचार्य, प्रेमप्रकाश मल्ल, तारादेवी आदि गायक/गायिकाहरूले आधुनिक गीतलाई लोकप्रियताको शिखरमा पुर्‍याइदिए । लेकाली समूह जस्ता अभियानले आधुनिक गीतमा माटोको सुवास भरे । शब्दशिल्पीहरूले राम्रा-राम्रा गीत नकथिदिएको भए आधुनिक गीत यो उचाइमा पुग्ने थिएन । यस प्रसङ्गमा गोपालप्रसाद रिमाल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम, माधव घिमिरे, नीरविक्रम प्यासी, तारिणीप्रसाद कोइराला, श्यामदास वैष्णव, माधव खनाल, अगमसिंह गिरी, राममान तृषित, केशवराज पिँडाली, लक्ष्मण लोहनीहरूलाई बिर्सन सकिन्न । यसपछि भूपी शेरचन, भीमदर्शन रोक्कार्,र् इश्वरवल्लभ, किरण खरेल, चेतन कार्की, रत्नशमशेर थापा, नगेन्द्र थापा, भीम विराग, भैरवनाथ रिमाल, क्षेत्रप्रताप अधिकारी, कञ्चन पुडासैनी, दिनेश अधिकारी, विश्वम्भर प्याकुरेल, रमण घिमिरे, राजेन्द्र थापा, बुद्धवीर लामा, आनन्द अधिकारी जस्ता गीतकारले आधुनिक गीतको श्रीवृद्धिमा विशिष्ट योगदान गरे, अझै गरिरहेका छन् । यसरी धेरै-धेरै र्सजकहरूको तपस्या र साधनाकै कारण नेपाली गीत यहाँसम्म आइपुगेको हो ।
साथीभाइहरू पप गीतले नेपाली शैलीका गीतलाई विस्थापित गरेको चिन्ता प्रकट गर्छन् । म पपगीतलाई नकारात्मक दृष्टिले हर्ेर्ने पक्षमा छैन । समयको हावाले ल्याएको पप गीतलाई पनि मान्यता दिनर्ुपर्छ । यद्यपि, नेपाली पप गीतमा पनि नेपालीपन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो आग्रह हो । हामीले माधर्ुयले भरिएका राम्रा गीत दिनसक्यौँ भने नेपाली श्रोता त्यतैतिर आकषिर्त हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।
good details about nepali
ram adhikari — Thu, 12/03/2009 - 15:18
good details about nepali sahitya
आधुनिक गीत आधुनिक हुँदैछ!
ठिस बुढा — Tue, 02/08/2011 - 23:11
धेरै प्रश्नहरुको उत्तर पाएँ।